KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
“Mfiase no de, na yɛn ani so atan yɛn. Atɛkyɛ ne nsuyiri twiw faa yɛn nneɛma nyinaa so.”​—Andrew, Sierra Leone.
“Bere a mframa kɛse no sɛee nneɛma wiei no, yɛsan kɔɔ yɛn fie. Biribiara anka. Asɛm no tɔɔ yɛn so. Me babea buu nkotodwe na osui.”​—David, Virgin Islands.
SƐ ASIANE bi ato wo pɛn a, ebia wobɛte nkurɔfo ase bere a wɔreka wɔn amanehunu ho asɛm no: sɛnea wɔn ho dwiriw wɔn, wɔn abam bui, wɔn adwene tu frae, wɔn ho yeraw wɔn, ne sɛnea na wɔsoso dae bɔne. Nnipa a wɔafa amanehunu a ɛte saa mu no pii abam abu ma wonhu nea wɔnyɛ wɔ abrabɔ mu.
Sɛ atoyerɛnkyɛm bi asi ama woahwere wo nneɛma nyinaa a, ebia w’abam reyɛ abu. Ebetumi ama asetena koraa afono wo. Nanso, Bible ma yɛte ase sɛ ehia wo a nwu. Efisɛ anidaso wɔ hɔ.
BIBLE MU NOKWARE MA YENYA ANIDASO
Ɔsɛnkafo 7:8 ka sɛ: “Asɛm awiei ye sen ne mfiase.” Sɛ atoyerɛnkyɛm bi to wo a, mfiase no ɛbɛyɛ te sɛ nea anidaso nyinaa asa no. Nanso sɛ wobɔ mmɔden toto wo nneɛma yiye a, biribi pa betumi afi mu aba.
Bible hyɛ bɔ sɛ bere bi bɛba a, ‘wɔrente agyee! anaa buei! biara bio.’ (Yesaia 65:19) Sɛ asase dan paradise wɔ Onyankopɔn Ahenni ase a, wei nyinaa bɛbam. (Dwom 37:11, 29) Atoyerɛnkyɛm biara rensi bio. Dadwen ne kɔdaanna nyinaa befi hɔ koraa efisɛ ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ: “Wɔrenkae kan nneɛma no bio, na ɛremma komam bio.”—Yesaia 65:17.
Wo de susuw ho hwɛ: Yɛn Bɔfo no ahyɛ bɔ sɛ ‘ɔbɛma wo daakye ne anidaso,’ kyerɛ sɛ, wobɛtena ase asomdwoe mu wɔ Onyankopɔn Ahenni ase. (Yeremia 29:11) Sɛ wuhu saa nokwasɛm yi a, ɔkwan bɛn so na ɛbɛboa wo na w’abam ammu? Sally a yɛkaa ne ho asɛm wɔ asɛm a edi kan no mu no kaa sɛ: “Sɛ wokae nneɛma pa a Onyankopɔn Ahenni bɛyɛ ama yɛn daakye no a, ebetumi aboa wo ma woayi w’adwene afi yaw a woafa mu no so, na woahwɛ sɛnea wubegyina tebea a wowom seesei no ano.”
Nea Onyankopɔn Ahenni bɛyɛ ama nnipa nnansa yi ara no, adɛn nti na wunsua ho ade pii? Sɛ woyɛ saa a, ɛbɛma woanya awerɛhyem sɛ, atoyerɛnkyɛm biara a woahyia no, sɛ ɛte sɛn oo, sɛ ɛte sɛn oo, ɛnsɛ sɛ woma w’abam bu. Afei nso, wubetumi ahwɛ kwan denneennen sɛ daakye atoyerɛnkyɛm biara rensi bio. Enkosi sɛ saa bere no bɛba no, Bible betumi ama wo afotu a ɛbɛboa ama woagyina atoyerɛnkyɛm biara a woahyia ano. Ma yɛnhwɛ saa afotusɛm no bi.
Ɛyɛ a nya bere fa gye w’ahome.
“Ɔhome nsa mã ye sen ɔbrɛ ne adehunu nsa mã abien akyidi.”​—Ɔsɛnkafo 4:6.
Abenfo ka sɛ, sɛ asiane bi to wo na “sɛ woantumi anna yiye a, ebetumi ama yaw a worefa mu no agye nsam koraa, na awerɛhow nso bɛmene wo.” Enti, nyansa wom pa ara sɛ wubegye bere ahome.
Ka w’asɛm kyerɛ obi.
“Onipa koma mu awerɛhow botow no, na asɛmpa ma edi ahurusi.”​—Mmebusɛm 12:25.
Ka w’asɛm kyerɛ wo busuani anaa w’adamfo bi a wugye no di. Ɔbɛyɛ aso atie wo, obetumi ahyɛ wo den, na ɔde mmoa a wuhia ama wo. *
Hu sɛ mmere pa bɛba.
“Na sɛnea [Onyankopɔn] bɔhyɛ te no, yɛretwɛn ɔsoro foforo ne asase foforo, na eyi mu na trenee bɛtena.”​—2 Petro 3:13.
^ nky. 18 Sɛ adwinnwen ne kɔdaanna tena obi so kyɛ pa ara, na ogye ne ho a ennye a, ebia ɛho behia sɛ ɔkɔ ayaresabea kɔhwehwɛ mmoa.
Sɛ Atoyerɛnkyɛm Bi Si a, Ɛsɛ Sɛ Woma W’abam Bu Anaa?
W’agyapade Afi Wo Nsa?